QM: Soomaaliya cunto yari ayaa jirta - BBC News Somali
QM: Soomaaliya cunto yari ayaa jirta
Isku dubaridaha arrimaha bani'aadminimada ee Qaramada Midobay u qaabilsan Soomaaliya Phillip Lazzarini, ayaa sheegay in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay dhibaatadii 2011-kii sababo la xiriira xaaladda sugnaanta cunnada oo aad u liidata, taasi buu yiri oo ka siidari karta bilaha soo socda.
Waxaa uu sheegay inay hadda u baahan yihiin Lixdan milyan oo dolar si looga hortago xaalad deg deg ah, isaga oo sheegay in lacagahaasi loo isticmaali doono cuno qaybin, biyo dhaamin, iyo qaybinta dalagii dadku ay beeran lahaayeen xili roobaad-ka soo socda.
Sidoo kale waxaa loo baahan yahay daad guraynta gargaarka lagu qaadayo baabuurta iyo adeegsiga diyaarado meelaha aan la gaadhi karin
Waxaa uu intaasi ku daray in nafaqadarada ka jirta dadka ku barakacay waddanka gudahiisa ay ka sarayso boqolkiiba 15 heerka xaaladda deg-degaa ah ee caalamiga ah.
Phillip Lazzarini, waxa uu sheegay in in-kabadan hal milyan oo qof oo ah qaxooti dalka gudahiisa ku barakacay oo ku nool gudaha Soomaaliya ay u baahan yihiin daryeel ayuu yiri.
Roobabkii guga oo daahay, maciishadda oo sare u kacday iyo colaadda ka jirta deegaanada ku habboon wax soo saarka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, ayuu Philip Lazzarini sabab uga dhigay in haatan ay qaylo dhaantani soo saaraan.
Phililip waxaa uu sheegay in sanadkan 2014-ka ay heleen in ka yar 160 milyan oo dolar oo u dhiganta boqolkiiba 17 lacagihii ay horey u dalbadeen.
Hayadu waxaa ay sheegtay in dhib ay ka haystaan dhanka ammaanka, sidaadi awgeedna ay kooban tahay meelaha ay ka hawlgali karaan, sida meelaha ay haystaan Al-Shabaab, iyo xataa meelaha aysan haysanin oo Muqdisho ay ka mid tahay, oo Nabadgalyada aan la isku halayn karin maadaama la bartilmaameedsado shaqaalahooda.